Amanqaku kaGaurav Saran kwi Martech Zone |
Amanqaku ngu Gaurav Saran
UGaurav Saran yi-CEO ye I-ReverseLogix, umboneleli kuphela we-end-to-end, i-centralized, kunye neenkqubo zokulawula imbuyekezo ezidibeneyo ezakhelwe ukuthengisa, i-ecommerce, imveliso kunye nemibutho ye-3PL. Ngaphambi kokusekwa kwe-ReverseLogix, uSaran wayekhokela ukuthengiswa kwamashishini kwiinkampani ze-Fortune 500 kwi-Microsoft. Ubambe izikhundla zobunkokeli kwimibutho emininzi yokuqalisa, eyiguqula ngempumelelo ukusuka kumanqanaba okuqala ukuya kwiinkampani ezikhulayo.
Njani iReverse Logistics Solutions can Streamline Returns Returning Processing kwi-E-Commerce Marketplace
NgoMvulo, Novemba 1, 2021 NgoMvulo, Novemba 1, 2021 Gaurav Saran
Ubhubhani we-COVID-19 wabetha kwaye onke amava okuthenga atshintshe ngequbuliso nangokupheleleyo. Zingaphezulu kwe-12,000 iivenkile ezenziwe ngezitena kunye nodaka ezivaliweyo ngo-2020 njengoko abathengi babehamba besiya kuthenga kwi-Intanethi besuka kubutofotofo kunye nokhuseleko lwamakhaya abo. Ukuhambisana nokutshintsha kwemikhwa yabathengi, amashishini amaninzi andise ubukho bawo be-e-commerce okanye afudukela kwintengiso ye-Intanethi okokuqala. Njengoko iinkampani ziqhubeka nokwenza olu tshintsho lwedijithali kwindlela entsha yokuthenga, ziyachukunyiswa